Kana iwe uri mupi webasa reemail, usandidanidzire kwandiri asi.
Izvo zviri kuitika muindasitiri kuwanda kwediki email service providers kubuda. Izvo zvinonakidza - zvine maitiro makuru, tumira mameseji akaomarara akasimba, tevera zvakakwana, bata mabhureki, nyaya dzekuendesa. Uye ivo vari kuzviita pachikamu chemutengo wevakomana vakuru.
Heano muenzaniso: Newsberry ndangova mutsigiri we Martech Zone (ndiko kufumurwa kwangu). Pandakanga ndichitarisa yavo saiti ndisati ndatendera kushambadza, ndakatarisa peji ravo remitengo uye ndakashamiswa nemitengo:
Ini ndinogona kuve neanyorerwo runyorwa anosvika zviuru zana uye tumira zvisingagumi maemail kwavari $ 530 pamwedzi? Izvo zvishoma kudarika $ 6,000 pagore. Ndinoyeuka pandakashanda kumubatsiri weemail kuti mari yedu yegore rega yebhizimusi diki yaive pamusoro peiyo… pamwe nemari yekutumira mameseji… pamwe API kuwana… kuwedzera, kuwedzera, kuwedzeredza…
Email vanopa sevhisi vanofanirwa kunge vasina musono (uye ndinoreva musoni) inosanganiswa nehurongwa hwe manejimendi, masisitimu ehukama hwevatengi, maturusi ekugadzirisa peji, uye analytics kunyorera. Kushambadzira michina vatengesi vakaita Aprimo uye Eloqua vatove kubuda mukutungamira pane izvi. Hazvina kukwana kutumira uye kuyera email futi… makambani anoda zvimwe!
Vatengi vanofanirwa kudzokorora zvirinyore zvirimo kubva kune ese masvikiro, zvine simba kugadzirisa zvinyorwa pane nhunzi, kuyera mhedzisiro - uye kunyangwe kupihwa mhinduro kune chakakunda uye chakarasika. Hatina nguva yekusvetuka kubva kune mutengesi mhinduro kune mutengesi mhinduro mukati mezuva… uye edza kusunga zvese analytics querystrings pamwechete… uye ongorora mikana. Email vanopa sevhisi vanofanirwa kushanduka kune zvatinoda.
Yasvika nguva yevapi vevashandi veemail kutora iyo leap, kana kuti ivo vanozopepetwa ne. Mailchimp yakazivisa 250,000 maakaundi akawedzerwa mumwedzi minomwe kumhinduro yavo. Asi kunyangwe Mailchimp yakadhura zvinotyisa sezvo isu takakura runyorwa rwedu zvinobudirira. Takaneta nemari hombe yemwedzi nemwedzi saka takavaka CircuPress - yakanaka, izere WordPress yakasanganiswa mhinduro email iri kutiponesa svumbunuro uye inoshandura matsamba edu.
Email yakave neyakareba, ine mari kumhanya - asi zvave kuda kupera. Hazvitore nhamburiko zhinji kuvaka nekuchengetedza yako yega sevhisi sevhisi mazuva ano. Shamwari Adam Mudiki akaguta nemutengo uye kushomeka kwemaotomation nzira, zvekuti iye achangobva kuzvivakira yake Agent Sauce… Iye zvino ane nhare, zvemukati manejimendi, Facebook, Twitter uye email zvakanyatso kubatanidzwa kune vake real estate vatengi. Iye anotokwanisa kuongorora kuendesa, track inovhura uye kudzvanya uye kubata ma bounces!